I-Rideaway Cottage Derby
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMartyn
Ngomhombiso ohonjisiweyo ojikeleze iveranda, iigadi ezintle kunye nesicwangciso somgangatho ojikelezayo, le ndawo imangalisayo yokuhlala ye-1910 ijonge uMlambo iRingarooma, iindawo zenkampu, iinkundla zentenetya kunye nebhola yomnyazi.
Ikhitshi linxibelelana nendawo yangasemva ye-alfresco / BBQ kwaye inyibilika ngaphandle komthungo kwigumbi lokutyela. Igumbi lokuphumla eliphambili libanzi ngokumangalisayo, njengawo onke amagumbi okulala amathathu. Kwaye igumbi lokuhlambela litsha kraca, lisanda kulungiswa ngokupheleleyo.
Ukuza kuthi ga ngoku, ububazi kakuhle ubuhle obuya kunikwa nguDerby. Usenokuba weva ngomdiliya okanye wahlala apha. Le mecca yebhayisekile yeentaba yenye yedolophu endala emangalisayo, ethe yahlaziywa kakhulu kutsha nje.
Le yenye yezona zindlu zicocekileyo nezona zitofotofo eDerby enamagumbi ayo asanda kupeyintwa kwaye ahonjiswe ngokutsha ngefanitshala entsha kunye nezinto zokufakelwa. Amagumbi okulala ama-2 angaphambili abamba iibhedi ezi-2 zeKing single enye kwaye kukho ibhedi entsha kaKumkanikazi kwigumbi lokulala elikhulu. Zonke izinto zokulala kunye neetawuli zibonelelwe kunye neengubo zombane.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze uziphekele, kwaye izinto ezisisiseko ziyafumaneka kubandakanya ioyile yokupheka, ityuwa kunye nepepile, iintlobo ngeentlobo zemifuno kunye neziqholo, iti kunye nekofu, izinto zokucoca, isicoci sokuvasa, iphepha langasese, ishampoo kunye nesepha.
Igumbi lokuhlambela elitsha kraca linamanqwanqwa etawuli ashushu, umgangatho ofudunyeziweyo, intloko yeshawa ehlengahlengiswayo kunye nebhafu evulekileyo nepholileyo yokuma yasimahla.
Le ndawo ikwi-acreage kwaye inendawo enkulu yokugcina ibhayisekile / indawo yokusebenzela enokukhanya kunye namandla. Kukwakho nesikhululo sokucoca ibhayisekile, ikhapoti kunye neegadi ezibanzi. Kukho indawo eyaneleyo yeemoto kwindawo.
Ihotele yaseDorset ikwisithuba seemitha ezingamakhulu ambalwa kwaye intloko yendlela yebhayisekile yasezintabeni inokuba malunga. 600 yeemitha phantsi kwendlela.
Kukho iindledlana ezingaphaya kwendlela ezilandela macala omabini omlambo kwaye zijikeleze ichibi ezidityaniswa nentloko yendlela yomzila.
Isishwankathelo i-cottage ibandakanya - I-intanethi ye-NBN yasimahla engenamda; Inkcazo enkulu ephezulu ye-Smart TV: I-Telstra TV bundle kuquka ukufikelela kwi-Netflix, i-Stan njl. Impahla epheleleyo ngomatshini wokuhlamba kunye nesomisi kunye nendlu yangasese yesibini; Tshixa indawo yokugcina ibhayisekile / iworkshop enezixhobo, indawo yokumisa ibhayisekile kunye nempompo yomgangatho; Indawo yokubeka ibhayisekile yangaphandle kunye nesikhululo sokucoca; Indawo yokupaka eninzi yeendwendwe kunye neetreyila zazo njl.njl; I-BBQ enkulu yokutshisa i-4 kwindawo ye-Alfresco; kunye nokufudumeza kwigumbi ngalinye.
Akukabikho venkile iphangaleleyo edolophini okwangoku kuyacetyiswa ukuba uyokuthenga kwenye yeedolophu ezinkulu ezifana neScottsdale (imizuzu eyi-25) eneWoolies, indawo yokubhaka, ibhula kunye neevenkile zeebhotile njl.njl. IGA jikelele ivenkile. Nangona kunjalo, kukho iicafe ezinkulu eDerby kunye neDorset Hotel ezantsi kwendlela ibonelela ngesidlo sasemini esimnandi kunye nedinala.
I-Telstra kuphela komnikezeli wenkonzo yefowuni onolwamkelo olululo kuyo yonke iDerby, ke ukuba unomnye umnikezeli, lindela inkonzo yefowuni ephathwayo ngamaxesha athile okanye anqongophele kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Martyn
Ndifumaneka ngeselfowuni amaxesha amaninzi ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na kwaye ube nonxibelelwano lwasekhaya onokuhla xa unengxaki.
Inombolo yomthetho: PLA/2019/13